mfondini, iphi imoto yam? iimephu zeapile kwi-ios 10 ziya kuba nayo impendulo
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo Sihlobo, iphi imoto yam? I-Apple Maps kwi-iOS 10 iya kuba nayo impendulo
Sihlobo, iphi imoto yam? I-Apple Maps kwi-iOS 10 iya kuba nayo impendulo
Ukusukela oko kwafunyanwa izikhonkwane zokupaka kwiikhowudi ze-iOS, besilindele ukuba iApple ikhuphe i-dude-iphi-imoto yam yesoftware yeMaphu ngaphandle kokufumana nto. Ezo zikhonkwane zokupaka zikhankanya i-iPhone kunye ne-iPad zazinjalo ifunyenwe emva kwi-2014 , kodwa iiMaphu zeApple azikwazi ukumakisha kwaye zibeke apho ubupake khona, ngokungafaniyo, yithi, Ngoku kuGoogle, ebenekhadi elikukhumbuza apho ume khona okokugqibela.
Ewe, kubonakala ngathi nge IOS 10 , I-Apple iyakwazisa ukufumana-kwam-imoto ukhetho ngqo kwi-app yeMaphu, ukuphosa ipini ngokuzenzekelayo ukuba uhambo lwakho alupheleli kwindawo yakho yaseKhaya. Iluncedo kakhulu ukuba unomkhwa wokuhambahamba iivenkile kangangeeyure, ngequbuliso ulahleko apho umise khona, okanye ukuba kuya kufuneka uqhube ujikeleze indawo edolophini de ufumane indawo engaziwayo ekunzima ukubuyela kuyo Emva koko-thina & apos sonke siye sabakhona.
Oku, kunye neendlela ezintsha zokuthintela umrhumo wendlela, ukongeza kungekuphela kwinto eluncedo yeeMephu, kodwa kwi smorgasbord yokuphuculwa okuncinci ezenza i-iOS 10 lolunye uhlaziyo lwesoftware ehamba phambili ukusuka kwiApple ukuza kuthi ga ngoku.
I-Apple Maps kwi-iOS 10 izakuvumela ukuba ufumane imoto yakho
susa iikopi eziphindiweyo kuluhlu Java
cima i-facebook messenger sound Android
Ungayibhalisa njani inombolo yakho yefowuni kwi-iMessage kunye neFaceTime (i-iOS 8 yokufundisa eneenkcukacha)
Ungazikhuphela njani ii -apps ze-Android kwifomathi yefayile ye-APK
'Qhubeka Uthethe kwaye akukho mntu uqhumayo' ngumdlalo wokuqhushumba ibhombu kwi-Daydream VR
Idili: I-Samsung Gear Fit2 Pro iyathengiswa nge-130 yeedola kwi-Best Buy, gcina i-22%!
Izinto ezothusayo, ezihlekisayo kunye nezinto ezingenamsebenzi ezifumaneka kwi-Amazon Prime Day 2021
Ungayikhubaza njani i-Flipboard Briefing kwi-Samsung Galaxy S6 / edge